ओलीको प्रश्न : पाँच दलको खटपट मिलाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो ? – Karnalikhabar
ओलीको प्रश्न : पाँच दलको खटपट मिलाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो ?
इलाम । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगलाई एउटा पार्टीको निर्देशनमा काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । ओलीले आयोगले दुई दिनलाई मनोनयन दर्ताको समय राखेको भन्दै आयोगले पाँच दलको निर्देशमा यस्तो निणर्य गरेको आरोप लगाए ।
नेकपा एमालेको उपस्थिति निक्कै कमजोर मानिएको इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कलमा एमाले नगर कमिटीको आयोजनामा भएको आमा सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले मतपत्रमा हरियो रंग प्रयोग गर्न लागेको भन्दै त्यो पनि कांग्रेसको सल्लाहमा गरेको आरोप लगाए ।
उनले निर्वाचन आयोगलाई पाँच दलीय गठबन्धनले दुरुपयोग गरेको बताए । उनले आयोगले दलसँग सल्लाह समेत नगरेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘पाँच दलको खटपट मिलाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो ?’ उनले अदालतको शाख संकटमा परेको बताए ।
उनले अदालतले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने व्याख्या मात्रै गर्न सक्ने भन्दै अदालतका गतिविधिको चर्को आलोचना गरे । एमालेको पक्षमा जनता देखेपछि केही शक्ति आतंकित भएर एमालेको सरकार ढालेको बताए । कम्युनिस्टकै बर्को ओढेकाहरु कम्युनिस्ट ढाल्न लागेको बताए ।
उनले नेकपा एमालेले लगाइदिएको सांसदको फुली बोकेर, मेयरको फुली बोकेर कम्युनिस्टको विरुद्धमा लागेको बताए । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको फिक्कलमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘एमालेले लगाइ दिएको जुँगामा ताउ लगाएर एमालेको बाकस खाली गर्छु भन्ने ?’
उनले बाकस कस्को खाली गर्ने कुराको जवाफ अबको स्थानीय चुनावमा जवाफ दिन आग्रह गरे । उनले एमालेलाई चिमोट्न वा टोक्न नखोज्न चेतावनी दिए । एमालेले वैशाख ३० गते पाँच दललाई एउटै कुच्चाले बढार्ने उद्घोष गरे । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेकपा एमाले एकतावद्ध भएर एक ढिक्का भएको बताए । नेकपा एमाले सूर्योदय नगर कमिटी अध्यक्ष दुर्गादेवी भट्टराईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका एक हजार भन्दा बढी कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेको आयोजकले जनाएको छ ।
अघिल्लो - युट्युब च्यानलनमा जथाभाबी अन्तर्वार्ता दिने शर्मिला वाइबा पक्राउ
क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचार गरेको भन्दै प्रियंका कार्कीलाई सीआईबीले ग¥यो सोधपुछ - पछिल्लो